Alarobia 08 Septambra 2021 – FJKM
Ilay Batisa miavaka
1-Maneho fahatanterahan’ny teny faminaniana
Maro ireo teny fikasana momba an’i Jesoa izay voasoratra ao amin’ny Testamenta Taloha . Isan’izany ny voasoratra hoe : « Jehovah nilaza tamiko hoe : Zanako ianao, Izaho niteraka anao androany « (Sal 2.7) sy ny hoe : « Indro ny mpanompoko , izay tantanako , dia ilay nofidiko sdy sitraky ny foko. Napetrako tao aminy ny Fanahiko » (Isa 42.1) .Samy tanteraka ara-bakiteny tamin’ny fanaovana batisa an’i Jesoa ireo faminaniana ireo .
2-Maneho ny fanatrehan’Andriamanitra
Hita taratra eto fa natrehan’Andriamanitra ny fiombonam-piainana eo amin’ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina . Misongadina eto koa ny fanatrehan’ny Fanahy Masina ao amin’i Jesoa . Hoy ny voasoratra hoe : « Ny Tompo izany Fanahy izany » (2 Kor 3.17).Hatrany am-piandohana dia efa hita taratra izany fiombonana lalina izany : « Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha isika hamorona olona tahaka antsika ... »(Gen 1.26)
3-Maneho fa Zanak’ Andriamanitra Jesoa
« Ianao no Zanako malalako, ianao no sitrako » (and22d) manambara mivantana amin’i Jesoa ny maha-Zanaka Malala , sitrak’Andriamanitra .Ato amin’ny Lio 3.38 dia ahitana ny maha-Zanaka miavaka an’i Jesoa fa sady taranak’i Davida avy amin’i Adama Izy no Zanak’Andriamanitra .
4-Dingana lehibe hirosoana amin’ny fanompoana
Manaja ny lamina ara-pivavahana i Jesoa . Toy ny fanoloran-jaza (Lio 2.22) , fitiavana Tempoly (Lio 2.42), batisa mialohan’ny hanatanterahany ny iraka nomena Azy.
Inona avy no mampiavaka ny batisan’i Jesoa?